Kana iwe uine Apple Watch Series 2 unogara kunze kwewatchOS 8 | IPhone nhau
Kana iwe uine Apple Watch Series 2 unogara kunze kwewatchOS 8
Tine chokwadi chekuti vazhinji venyu makajeka izvo zvishandiso zvakasara kunze kweiyo nyowani vhezheni yeiyoOSOS 8 inoshanda sisitimu. Asi pane zvakare vashandisi vatsva vakawanda vari kuuya kuApple world nekuda kwechigadzirwa ichi kana vari kufunga kutenga imwe, ndosaka chinyorwa ichi chakanangana navo.
Iyo Apple Watch Series 2 inoshanda chaizvo panguva ino uye kunyangwe vaine chekare cheOSOS 6.2 inoshanda sisitimu havana matambudziko ekushanda. Kana Apple yasarudza kuburitsa vhezheni 8 yeiyo OS ivo vachange vari kunze kweyekuvandudza.
Iyo Apple Watch Series 2 kubva munaGunyana 2016
Ese mamodheru anoenderana neiyo nyowani vhezheni uye nekuda kweichi Apple inocheka iyi vhezheni yakananga kuwachi yakapihwa munaGunyana 2016, pasina mubvunzo inguva inopfuura nguva inonzwisisika yevashandisi kushandura iyo modhi kana kungonakidzwa nemabhenefiti avo vasina kukumbira zvakawanda kupfuura zvazviri kutopa. Uye ndizvo kusatambira vhezheni itsva yehurongwa hwekushandisa hazvireve kuti mudziyo unomira kushanda, ichi chinhu icho vashandisi vazhinji vachiri kusanyatsonzwisisa.
Kune rimwe divi, kana chinangwa chako chiri chekupinda munyika yeApple Watch woitenga, zvirokwazvo tinokurudzira vhezheni yazvino vhezheni yacho kana mune chero mamiriro ezvinhu kana iwe usiri kuda kushandisa yakawanda paiyo Series 6 vhezheni , zvakanakisa kusvetukira mukati meiyo SE vhezheni iyo yakanyanya mutengo. Iwe unogona zvakare kutarisira kudonha sezvo Apple inogona kuburitsa yayo nyowani Series 7Kunyangwe paine pasina runyerekupe rwakawanda nezvazvo izvozvi, iyo nyowani modhi yekutarisa inenge yave pedyo kutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kana iwe uine Apple Watch Series 2 unogara kunze kwewatchOS 8
Iyi pfungwa inoratidza iyo iPhone 13 ine yakaderera notch uye iri nani kamera
Ini handisi kugamuchira WhatsApp notices kubva kune akachengetedzwa machats